Moments leh saaxiibo 35
Waa maxay sababta abeesadu u kala duwan tahay dadka kala duwan? Mararka qaarkood nabigu wuxuu u hadlaa sida wakiilka shar ah, waqtiyada kale sida calaamadda xigmadda. Maxay tahay sababta ninku u cabsanayo cabsida dabiiciga ah ee maskaxda?
Waxbarashada iyo tababarku waxay leeyihiin waxyaabo badan oo la sameeyo habka uu ninka u danaynayo masaska iyo wax kasta oo kale. Hase yeeshee, waxaa jira waxyaabo ka mid ah nafta isaga oo ka baxsan waxbarashadiisa taas oo u dhiganta inta kale. Abees ayaa si habboon loo tixgelin karaa jaahilnimo iyo xumaan ama calaamadda xigmadda. Waxay ku xiran tahay aragtida la qaadayo. Marka laga reebo burburinta qashin qubka, kuwaas oo masalooyinka quudinaya, lama ogaanayo in abeesadu bixiyaan faa'iidooyin gaar ah oo ku saabsan manka iyo adduunka, ama inay muujiyaan caadooyin aad u qurux badan oo ka mid ah xayawaanka kale, ama in ay muujiyaan astaamaha sirdoonka ee ka weyn kuwa kale foomamka xayawaanka. Taas beddelkeeda, mararka qaar waa dhegoole iyo indhoole; waxay isku kalsoonaan karaan sidii ay u geli lahaayeen duufaan, oo aan awoodin inay is difaacaan ama ay ka fogaadaan khatarta, iyo qaniinyada dabiiciga ah ayaa si aad ah u dhimanaya marka la soo saaro dhimashada isla marka dhibbanaha la qaniinay. Hase yeeshee, waxaa jira maaddooyin is barbardhac ah oo aan waxyeello lahayn, dhaqdhaqaaqa abeesaduna waxay ka mid yihiin jilicsanaanta iyo ugu dhakhsaha badan ee dhammaan xayawaanka.
Ma jiraan wax abid u shaqeynaayo ama ujeeddo kasta oo ay u adeegto taas oo sheegaysa in lagu hadli doono sida ugu caansan ee xayawaanka ama calaamadda xigmadda. Hase yeeshee, markii ugu horraysay ee ay ku hadlaan ereyada iyo qorniinka waxay ku tilmaamaan sida ugu fudud ee xayawaanka oo dhan, waxayna u adeegsadeen calaamad xikmad.
Waxaa jira sababo badan oo sababta nabarka dhab ahaan loogu yeeri karo calaamadda xigmadda. Waxaa ka sii wanaagsan wax kasta oo abuuray abeesiga, waxay la xidhiidhaan oo ay dhaqdhaqaaqaan awoodda korantada ee caalamka, oo awoodda siisa nin xigmad leh, marka nin isu diyaariya inuu helo. Xaaladdan xaadirka ah ee ninka ayaa ah mid aan habbooneyn oo aan awood u lahayn in uu si toos ah ula shaqeeyo isaga. Nidaamka xayawaanka ayaa sidaas loo sameeyay si loo oggolaado talaabada tooska ah ee awooda korontada. Laakiinse xooggiisa waxaa ka buuxa hodantinimada; waxa kaliya ee ku shaqeeya jidhka masaska. Maskaxdu waa lagama maarmaan in la ogaado oo la isticmaalo xigmadda. Tani waa abeesadu maahan. Abeedku wuxuu leeyahay jirka xoolaha oo dhan oo dhaqdhaqaaq leh oo dhaqdhaqaaq leh. Cirbadda lafdhabarta ayaa hareereysa abeesada oo dhan, waana qaybta lafdhabarta iyada oo awoodda korantadu ay dhaqangaliso. Qaybta lafdhabarta ee manta waxay ku jirtaa qaab maskaxeed, laakiin lafdhabarka qofku uma oggolaanayo awoodda korantada in ay si toos ah u socoto iyada oo sababtuna tahay in hadda laga soocayo qaybta lafdhabarta ee isticmaalka imika ee ay dareemayaasha dareemayaasha jidhka oo ka soo baxa xudunta laf-dhabarka ayaa la dhigaa. Qorshaha joogtada ah ee dareemayaasha iyo isticmaalka dareenka dareemayaasha ayaa ka hortagaya awooda korontada ee caalamiga ah in ay si toos ah u shaqeyso jidhka oo ay nadiifiso maskaxda qofka. Gobollada caloosha iyo miskaha ee jidhka ayaa dareemayaasha dareemay, abeesad sida. Dareemayaashaas waxay hadda bixiyaan xubnaha unugyada leh awoodooda ficilka. Waxaa la sheegay in buugaagta bariga ah in kundalini, awooda abeesada, ayaa lagu dhexjiray jidhka iyo hurday; laakiin marka awooda majaajiladani ay soo iftiimiso waxay u iftiimin doontaa maskaxda dadka. La tarjumay, tani macnaheedu waa in qaar ka mid ah dareemeyaasha dareemayaasha jirka, hadda aan la isticmaalin ama si xun loo isticmaalin, waa in loogu yeeraa ficilkooda habboon; taas oo ah, in la furi doono lana xidhiidhi karo xudunta lafdhabarta. Hawlgalkani waa sida furaha furaha korontada ee korontada ku xiran oo hadda bilaabaya mashiinka qalabka. Marka la furo oo la xidhiidha xadhigga laf-dhabarka ee jirka qofka, korontada ayaa loo rogay. Tani ficilkan koowaad ee ugu horreeya ee ku dhaca dareemayaasha jidhka. Haddii ururada dareenka jirka ahi aanu xoog u lahayn oo ay ku haboon yihiin gubashada hadda gubanaya. Marka loo eego farsamooyinka, waxay jidhka ka dhigi doontaa bukaanka, aan habeynin, dhalin karno ama keeno dhimasho. Haddii ururada maskaxdu ay ku haboon yihiin awoodda ayaa kor u qaadaya jirka jirdhiska jirka ka dibna ka dibna caddaynaya oo iftiiminaya maskaxda, markaa si dhakhso ah maskaxdu waxay u ogaan kartaa mawduuc kasta oo ku saabsan dunida jidhka ah ama dunida caalamiga ah. Awoodgani waxa uu leeyahay dhaqdhaqaaqa maskaxeed waxana uu ku shaqeeyaa xadhigga laf-dhabarka ee gudaha qaybta laf-dhabarka, taas oo ah qaabka maskaxda. Sida abeeso, awoodda waxay u keeni doontaa dhimasho qofka rooga oo aan awoodin in uu barto. Sida abeeso, awoodda ayaa kor u qaadaysa jir cusub, waxayna gooysaa midda hore, sida abeesadu u jajabiso maqaarkiisa.
Dadku waxay leeyihiin cabsi cabsi ah oo xayawaan ah sababtoo ah xayawaan kasta oo dunida ka mid ah waa qaab kala gooni ah oo gaar ah ee rabitaanka dadka, iyo xayawaanka uu baqdin galo wuxuu muujiyaa qaabka gaarka ah ee uu jecel yahay ee uusan u lahayn. Marka uu sayidkiisu awoodo inuu awoodo inuu xukumo ninkuu rabo, wuu ka baqayaa xayawaanka, xayawaankuna ma baqayn doono, waxna waxyeello kuma lahan nin. Nin wuxuu leeyahay cabsi baaxad leh oo ah abeeso sababtoo ah ma uusan haysan wax awood ah mana awoodi karin inuu xakameeyo xoogga isaga oo ah abeesada. Hase ahaatee abeesadu waxay leedahay jilicsanaanta qofka, inkasta oo uu ka baqayo. Fikradda xigmadda ayaa sidoo kale soo jiidata dadka. Laakiin waa inuu ka adkaado cabsida iyo jacaylka uu jecel yahay ka hor intuusan helin xigmad, haddii kale, sida awoodda nabarka-la midka ah, waxay burburin doontaa ama ka dhigaysaa waalan.
Ma jiraan wax run ah oo sheekooyinka sheegaya in Rosicruciansku weligood gubteen nalalka? Hadday sidaas tahay, sidee loo sameeyey, maxay ujeedadoodu u adeegeen, oo miyaa la samayn karaa oo hadda la isticmaali karaa?
Ma jirto sabab macquul ah sababta Rosicrucians ama hay'adaha kale ee munaasabadaha loo baahnaa aysan sameynin lana adeegsan laydh guban. Sababta aan u aragno nalalka gubashada leh waa dabeecad gubasho ah, oo ugu muhiimsan fikradahayaga in laydhku yahay inuu yahay weel uu ku jiro maaddada dabka, sida jiidashada iyo saliidda, ama gaaska iftiinka loo isticmaalo , ama iyada oo loo marayo tamarta korontada ee hadda soo baxaysa oo siinaysa iftiin ayadoo la raacayo fiilooyinka. Fikradda laydhku waa, in uu yahay iftiinka la bixiyo.
Nalalka dabacsan ee gubanaya ee Rosicrucians ayaa loo arkaa inay yihiin kuwo aan macquul ahayn, maxaa yeelay waxaan u maleyneynaa in nalalku aanu siin karin iftiin aan shidaal ahayn ama wax la keeno. Waxaa la rumaysan yahay in shaashad weligeed ah ay tahay mid ka mid ah caqabadaha badan ee u maleynaya in ay ka sarreeyaan caadooyinka ku saabsan Rosicrucian iyo waqtiyada warbaahinta.
Hadda ma sheegi karno sida Rosicrucian ama ragga qaarkood da 'dhexe ay sameeyeen laydh guban, lakiin mabda'a ah in laydhka laga yaabo in la sharxi karo. U sheeg in marka hore la fahamsan yahay in shaashad weligeed nadiifinayso saliid ama gaas ama wax kale oo muhiim ah oo ay lagama maarmaan tahay in la keeno farsamoyin. Jidhka iyo qaabka laydhka guban kara wuxuu noqon karaa maaddo ku haboon isticmaalka nalalku ku xiran yahay maanka maskaxda ku haya oo sameeya. Qaybta muhiimka ah ee lambarku waa maaddooyinka gaarka ah kuwaas oo iftiinka la bixiyo. Iftiinka ayaa iftiiminaya iftiinka iftiinka ama iftiinka iftiinka. Laguma soo saarin habka gubashada. Waxyaabaha loo isticmaalo si loo iftiimo iftiinka waa in si taxadar leh loo diyaariyaa loona hagaajiyaa ama la isku daraa iftiinka etheric ama iftiinka. Diyaarinta qalabkaan iyo dareenka iyo hagaajinta waxay u tahay iftiinka iftiinka ama iftiinka iftiinka wuxuu ahaa mid ka mid ah qarsoodiga Rosicrucian iyo Dabaalayaasha dabka. Taas oo dhan waxay noqon laheyd, hadda waxay muujisay helitaanka riyadu. Radium waxay u muuqataa in ay iftiimiso iyada oo aan lumin ama ay hoos u dhacayso. Radium maaha sidii loola jeedo in laftiro laftiisa. Iftiinka ayaa loola jeedaa oo wuxuu soo jiitaa riwaayad. Iftiinka u muuqda inuu riyadeeyo reydku wuxuu ka yimaadaa iftiinka cimilada ama iftiinka cimilada. Ramadaanku wuxuu u adeegaa sidii dhexdhexaad oo keliya oo iftiinka laga keeno caalamka cimriga oo lagu muujiyo dareenka jirka.
Waxyaabaha ay ka soo baxeen iftiinka laydhka gubanaya ee Rosicrucians ayaa loo qorsheeyay mabaadi'da la mid ah inkasta oo ay diyaar u noqon lahayd si ka duwan oo laga yaabo inay ka mid tahay waxyaabo kala duwan oo ka badan radium, maadaama ay jiraan noocyo kale oo aan ahayn radium iyada oo taas laga bilaabo ether ama caalamka cimriga waxaa laga yaabaa in lagu muujiyo adduunka jir ahaaneed.
Laydh gubta leh ayaa loo badinayaa in loo dhiso kuwo badan oo kala duwan. Laydh loo sameeyay hal ujeedo lama isticmaali karo dhammaan isticmaalka laydhka gubanaya. Tusaale ahaan, radium ayaa siinaya iftiin, laakiin radium hadda looma isticmaalo iftiin maxaa yeelay maaha oo kaliya diyaarinta in ay aad u qaali u tahay in la isticmaalo, laakiin sababtoo ah iftiinka shucaaca ayaa ku dhaawacmay meel u dhow jiridda xayawaanka.
Halkan waxaa ku yaal dhowr ka mid ah ujeedooyinka laydhka gubanaya laga yaabo in la sameeyey oo loo isticmaalo: Si aad u iftiimiso kulamo qarsoodi ah; in ay eegaan oo ay baaraan dunida caalamiga ah iyo qaar ka mid ah hay'adahooda; in la iska ilaaliyo saameynta xun iyo hay'adaha ka soo horjeeda shaqada taas oo mid ama wax ka badan laga yaabo inay la shaqeeyaan; si loo ilaaliyo jidhka jirka iyo iftiinka cimilada inta lagu jiro hurdada ama inta lagu gudo jiro; sida macnaheedu yahay daaweynta ee birta si loo kala saaro; sida habka loo diyaariyo jilibyada loogu talagalay ujeedooyinka daawooyinka ama wax ka qabashada nacaybka; si aad u hagaajisid dareenka jireed ee maskaxda ama dareen gudaha ah oo caalamka la arko la arki karo.
Nalalka kale ee guban kara hadda waa la sameyn karaa, laakiin inkastoo laga yaabo in mustaqbalka laga dhigo maahan inay hadda isticmaalaan. Waxaa loo adeegsan jiray dhaqanka ama dabeecadaha maskaxda iyo ujeedooyinka. Waqtiga shaqo ee noocan oo kale ah way dhaaftay. Maskaxda dadku waa in ay ka soo baxaan dhaqamada noocaas ah. Waxa la xakameeyay macnaha astaamihii astaamuhu waa inuu yahay oo hadda waa in la xakameeyo maskaxda iyo iyada oo aan jirin habab kale oo ka badan kuwa uu u keeno jidhkiisa. Maskaxdu waa inay noqotaa iftiin. Jidhku waa inuu ahaadaa laydh. Dadku waa in uu diyaariyaa jirkiisa oo uu u hoggaansamaa maskaxda in maskaxdu ay ku iftiimin doonto iyada oo ay u iftiiminayso dunida ku hareeraysan, oo ka samee ninkii sawir leh oo iftiin leh oo iftiiminaya iftiinka wakhti kasta.